cashuur | Somaliland.Org
Tag Archives: cashuur
Maareeyaha Dekedda Berbera oo ka warramay Tacriifadda Dekedda ee la kordhiyey
April 24, 2008	Berbera (Somaliland.org) – Maareeyaha Dekedda Berbera, Cali Cumar (Xoor-xoor) ayaa caddeeyey inay kordhiyeen tacriifadda cashuurta laga qaado badeecadaha ka soo degga Dekedda, balse, waxa uu sheegay in korodhka cashuurtu uu yahay wax aad u yar ee aan la kordhin 50%. Maareeyaha Dekedda oo maanta xafiiskiisa Berbera ku qabtay Shir jaraa’id waxa uu sheegay in cashuur […]
Golaha Wakiillada oo Fadhi Albaabadu u xidhan yihiin ku ansixiyey 2% Cashuurta lagu kordhiyey
November 18, 2007	Hargeysa (Somaliland.org) – Golaha Wakiillada Somaliland ayaa fadhi albaabadu u xidhan yihiin oo uu maanta yeeshay ku ansixiyey cashuur-kordhin 2% ah oo xukuumaddu soo jeedisey in loo saaro hawlgalka gurmadka iyo maamul-fidinta gobolka Sool, Sanaag-bari iyo Buuhoodle. Fadhigan oo saxaafaddu dibadda ka joogtey, wax war ah oo rasmi ahina aanu ka soo bixin ayaa warar […]
SOMALILAND IYO CASHUUR KORDHINTA: By: Yuusuf Goodir
November 4, 2007	Haddii masuuliyiinta maaliyaddu rumaysan yihin in kordhinta boqolkiiba midhadh aanay wax badan ahayn waxaan idiin sheegayaa in sida aboorku aqal somaliga u cuno ay cashuurtuna umadda u cunto sida uu dundumadda u dhisana ay umadda u dhisto! Marka wadamadda dunidda lagu asteeyo (criteria) wax soo saar kooda Somaliland waxay dhacdaa xayndaabka kuwa ugu hooseeya. Weli […]
Xukuumadda Somaliland oo 2% kordhisey cashuuraha kala duwan
October 23, 2007	Hargeysa (Somaliland.org) – Xukuumadda Somaliland ayaa kordhisey cashuuraha dalka 2% , taas oo loogu talagalay hawlgalka iyo gurmadka Gobolka Sool. Sida uu sheegay Warsaxaafadeed uu maanta soo saaray Afhayeenka Madaxtooyada, cashuur-kordhintan waxa lagu go’aamiyey shir uu golaha Wasiirradu yeeshay Isniintii shalay, kaas oo uu guddoominayey, Madaxweyne Riyaale, isla markaana lagaga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee […]